एक यौनकर्मीको प्रेमकथा …  Sourya Online
सौर्य अनलाइन २०७५ वैशाख १५ गते ११:१७ मा प्रकाशित
उनी भन्छिन्, ‘मेरो घरमा आमाबुबा, सानी बहिनी र भाइ छन् । घरमा सधैँ पैसाको खाँचो पर्दथ्यो । परिवारमा कमाउने अर्काे सदस्यको आवश्यकता थियो । त्यसैले मैले विचार गरेँ कि मैले पनि कमाएँ पनि घरमा केही मद्दत मिल्थ्यो । त्यसैक्रममा गाउँको एक मान्छेले सहरमा काम दिलाउने कुरा गर्यो । उसले मेरो आमाबुबासँग पनि कुरा गर्यो । उसले सहरमा गएर काम गर्दा राम्रो पैसासमेत पाइने कुरा गरेपछि उसको साथमा करिब पाँच वर्ष सहरमा आएँ । तर, केही दिनको आलटालपछि उसले मलाई कोठीमा लगेर बेचिदियो ।’
मेरा लागि कसले सहयोग गर्ने ? त्यहाँमाथि पनि यो ठाउँ मेरालागि जेलसरह भयो । मेरो साथमा जबर्जस्ती पनि गरियो ता कि ग्राहकका लागि म तयार बनँु । अब, मेरा लागि मर्ने वा यो पेसामा लाग्नेबाहेक कुनै अर्काे बाटो थिएन । मर्नुभन्दा बहुलाउनु निको भने झैँ अन्त्यमा यस पेसामा आफूलाई सौपिएँ ।’ ‘भगवान्को घरमा अँध्यारो छैन तर ढिलो हुन सक्छ’ भनेझैँ उनको जिन्दगीमा मनिष (नाम परिवर्तन) आएपछि पुरै परिवर्तन भयो । उनी भन्छिन्, ‘मनिष र मेरो बीचमा कसरी एक किसिमको सम्बन्ध बस्यो हामी दुईलाई थाहै भएन ।’
उसले कोठीमा रहेको कुनै एक युवतीसँग प्रेम गरेको र उसलाई निकाल्न चाहेको कुरा बतायो ।’ मैले उसलाई सोधेको थिएँ छुटकारा भएपछि के हुन्छ ? मनिषले विश्वासका साथ भनेका थियो उनीसँग म बिहे गर्न चाहन्छु । यसरी कोठीमा गएर यस्ता कुरा गर्ने धेरैसँग उनीहरूको सम्पर्क भएकाले सोझै विश्वास गर्न सकेनन् । अतुलले साँच्चै मनिषले भनेको गर्छ त भनेर उनको भावना विचार गर्न केही दिनपछि आउनु भनेर पठाए ।